Waxaad ku beeran kartaa yaanyada cidlada adoo ku mahadsan tamarta qoraxda | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tamaandhada waxaa lagu beeri karaa lamadegaanka iyadoo lagu mahadinayo tamarta qoraxda
Jarmal Portillo | | Beeraha deegaanka, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxay cadeeyeen inay yihiin kuwo aad waxtar u leh oo dhinacyo badan leh markay tahay qaadashada fikradaha cusub. Cusbooneysiinta farsamada casriga ah ayaa maanta laga hirgaliyay suuqyada iyada oo ay ugu wacan tahay tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar ee koronto ahaan isku filan ilaa habab cusub oo ganacsi loogu dhowaado, tamar la cusboonaysiin karo ayaa ka soo bixi kara.
Ayaa odhan lahaa way awoodaan yaanyo ku dhex beero lamadegaanka dhexdiisa, iyadoo aan wasakheyn oo aan gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ku sii daynin jawiga. Hagaag, tani mar horeba waa xaqiiqo ay fulisay beer hormood ah oo ku taal Australia. Tiknoolajiyadda lagu fulinayo waxaa soo saartay shirkadda reer Denmark Aalborg CSP.
Shirkaddani waxay ku guuleysatay inay rakibto nidaam tamarta qorraxda isku urursan oo awood u leh inuu keeno tamarta isla markaana macaaneeyo biyaha macaan ee lagama maarmaanka u ah soo saarista. qiyaastii 17 milyan kg oo yaanyo dabiici ah sanadkiiba. Tani waxay u dhigantaa 15% dhammaan suuqa yaanyada ee Australia.
Shirkadan hormoodka ah waxay bilowday inay ka hawlgasho xarun ku taala beerta Sundrop (Port Augusta) iyadoo si buuxda u shaqeynaysa Oktoobar 6 ee bishaan. Dhismaha ay xaruntu ku taalo waa mid waara oo kuyaala dunida oomanaha ah waxayna leedahay oo leh 20.000 oo mitir murabac oo ah guryo lagu koriyo. Faa'iidada xarumahan ayaa ah inaysan ku tiirsanaan shidaalka shidaalka iyo ilaha biyaha macaan ee howlgalkooda, laakiin taa bedelkeeda ay isticmaalaan tamar dib loo cusbooneysiin karo si ay awood ugu yeeshaan inay cusbooneysiiyaan biyaha loo baahan yahay waraabka ayna siiyaan tamarta looga baahan yahay wax-beeristooda.
Si loo daboolo baahiyahan tamarta iyo biyaha, shirkadda reer Denmark waxay soo saartay nidaam CSP ah oo awood u siinaya bixinta tamarta lagama maarmaanka u ah kululeynta aqalka iyo awood u lahaanshaha waraabinta yaanyada. Tamarta ayaa la soo saaray 23.000 heliostats oo lagu rakibay dabaqa lamadegaanka, kaas oo ururiya falaadhaha qorraxda isla markaana ku farsameeya dusha sare ee munaarad aad u dheer oo 127m ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Beeraha deegaanka » Tamaandhada waxaa lagu beeri karaa lamadegaanka iyadoo lagu mahadinayo tamarta qoraxda
Cusboonaysiinta ayaa dhib ku ah helitaanka maalgelinta Spain
Uranium shucaac xad dhaaf ah ayaa laga helay waqooyiga-galbeed ee badda Mediterranean